🥇 ▷ CameraModes waxay baabi'isaa howlaha aadan u isticmaalin kamaradda [tweak] ✅
CameraModes waxay baabi’isaa howlaha aadan u isticmaalin kamaradda [tweak]
Ku fududaato howlaha barnaamijka Kaamirada kamaradaha ‘CameraModes tweak’
Codsiga Kaamiradda ee ku yimaadda nidaamka hawlgalka ee iPhone, macruufka 8, wuxuu noo oggolaanayaa inaan sawirro iyo fiidyow u qaadno qaabab kala duwan, suurtagalna uma adeegsanno dhammaan wixii la heli karo waana sababtaas, markaa, waxaan arki doonnaa sida aan awoodno, Thanks to CameraModes tweak oo laga heli karo Cydia, samee kaliya fursadaha Kaamirooyinka ee aan runtii adeegsan doonno.
Iyada oo la adeegsanayo CameraModes waxaad dooranaysaa oo keliya xulashooyinka aad rabto inaad isticmaasho
Waxay ku dhacdaa dhamaanteen inaan haysano dad badan Ikhtiyaarada kamaradaha iPhone taas oo aanaan u isticmaalin, ama inaan u isticmaalno inaan tijaabinno ka dibna waxaan iska ilownaa inaan meesha ka saarno, marka sawirka soo socda ee aad rabto inaad si dhaqso leh u qaaddo waxay noqon doontaa fiidiyow dhaqaaq tartiib ah.
Waxaan u muuqdaa inaan si joogto ah u adeegsado ikhtiyaarada Sawirrada iyo Fiidiyowga Kaameerada, si kastaba ha noqotee, xulashooyinka kale sida Waqtiga-dhicitaanka, Mooshinka Qun-socodka, Sawirka 1: 1 ama Pan ayaa sidoo kale u adeegsada, laakiin si dhif ah. Tani waa sababta aan uga fiirsanayo in tigidhadan loogu talagalay iPhone ee leh Jailbreak ay noo oggolaan doonto fududeeyo xulashooyinka kamarada kuwa runtii ku habboon maalmaheenna maanta.
Mar haddii la soo dejinayo tigidhadaan, waxaan si fudud u gali doonnaa aaladda aaladda ka dibna aan dooranno qeybta kamaradaha kamaradaha halkaasoo aad awood u siin karto ama aad curyaamineyso xulashooyinka aad rabto inaad maskaxda ku hayso markaad isticmaaleyso kamaradda qalabka.
Xusuusnow taas haddii aad haysato kaameerada app-ka furan, waa inaad xidhataa si aad u aragto isbeddelada ku jira menu iyo, aad iyo aad muhiim u ah, waa inaad xulo ugu yaraan hal qaab qabasho ama app kaameeraha waa la xannibi doonaa.
U soo dejiso CameraModes iPhone oo leh Jailbreak
Hadaad rabto inaad rakibto Kaamirooyinka Waxaa laga heli karaa Cydia iyada oo loo marayo keydka BigBoss lacag la’aan. Si loo awoodo in loo rakibo, waxaa lagama maarmaan ah in la yeesho xiriir internet ah si loo awoodo in la soo dejiyo loona rakibo baakadaha ay kujiraan tweak-kaan, sidoo kale waxaa lagama maarmaan noqon doonta in aad haysatid iPhone ama iPad leh Jailbreak, haddii aadan horay u sameynin oo xiiseynaya, waxaan kugula talineynaa inay fiiro gaar ah naga yeeshaan hage si jailbreak iPhone la macruufka 8 ka kombiyuutarada Mac ama Windows. Tweakkan wuxuu la jaan qaadayaa aaladaha leh iOS 7 iyo iOS 8.
Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay oo aad uga faa’iideysato kamaradaha kamaradaha ee loo yaqaan ‘CameraModes tweak’ ee iPhone-ka aad la wadaagto Jailbreak, ha ilaawin inaad nala wadaagto khibradaada annaga oo ka faalloon doona faallooyinka.